I-china abakhiqizi bebhodi lesitolo i-Lawson esitolo esidayisa izinto kanye nabaphakeli | UZhengcheng
Ukukhiqizwa kwesikhunta okwenziwe ngokwezifiso, ngokuya ngezidingo zamakhasimende, khetha izinto ezingenisiwe, ifilimu ebekwe ngesandla, futhi uqinisekise ngokunembile ukuthi yonke imininingwane yomkhiqizo iphelele.
Igama lomkhiqizo: Zhengcheng
Okubalulekile: Ishidi le-acrylic elingenisiwe, ifilimu eyi-3M anti-UV, i-Aluminium eyinhlanganisela
Isitifiketi: ISO9001, CE
Igama lomkhiqizo: Ibhodi lokungena lesitolo esikahle
Isicelo: Isitolo esikahle, ikhemisi, indawo yokudlela, isitolo sezithelo
Umthombo wokukhanya: Ishubhu eliholelekile
Ubude * Ukuphakama
Ukufakwa: Ukufakwa kwe-Wall-mounted
Izinzuzo zokwenza ibhodi lokungena lesitolo esikahle seLawson
Eminyakeni embalwa edlule, besiklama, sikhiqiza amabhodi wokuthenga angaphambili ezitolo ezilula zeZhongbai Lawson, ikakhulukazi eHubei naseChangsha.
Kungani ukhetha isevisi yethu?
1. Singumkhiqizi oqeqeshiwe wezimpawu zesitolo esikahle, esinokuhlangenwe nakho okucebile futhi akukho bantu abaphakathi ukwenza ikhomishini. Kunganciphisa izindleko zakho zokuthenga.
2. Inkampani yethu ifakwe abaklami abangochwepheshe ukuhlinzeka ngezikimu zamahhala zokuklama ngokusho kwezidingo zamakhasimende.
3. Siphikelela ekukhetheni amashidi amasha e-acrylic angeniswe evela eJapan, ukuze imikhiqizo ekhiqizwe ngale ndlela kungelula ukushintsha umbala futhi kungabi lula ukuyikhubaza. Ngaphezu kwalokho, ifilimu esetshenziselwe ukwenza lesi sibonakaliso nayo ingeniswa ifilimu engu-3m, eqinisekisa ikhwalithi nokubonakala kwesibonakaliso.
4.Singenza umphumela kaMose ebhodini lezitolo leZhongbai Lawson, futhi senze konke okusemandleni ukwanelisa umphumela oyifunayo wekhasimende.
5. Inkampani yethu inethimba lochwepheshe eWuhan naseChangsha ukukala usayizi wesitolo nokufaka izimpawu zesitolo sesitolo esikahle seLawson.
6.The logo okuyingxenye umshini ibhamuza udini, umphumela 3d kusobala.
Eminyakeni embalwa edlule, inkampani yethu ikhiqize izimpawu ezingaphezu kuka-400 zesitolo sezitolo ezikahle zeZhongbai Lawson, kanye nezinhlamvu ze-LED nezimpawu eziseceleni.
Izimpawu esizikhiqizayo zinosayizi abaningi ongakhetha kubo, futhi amakhasimende angakhetha ukucaciswa okuhlukile ngokuya ngamasayizi wesitolo ahlukile.
Langaphambilini Ibhodi lokungena lesitolo esilula se-Ministop
Isitolo esikahle se-Signboard
Isitolo Esilula Isitolo Esingaphambili
Ibhodi lokungena lesitolo esikahle
Ibhodi lokungena lesitolo sezidakamizwa
Ibhodi Yesitolo Sezokwelapha